Fanaovan-tsonia fifanarahana enina avy hatrany teo amin’ny firenena Malagasy sy ny OIT no tontosan’ny filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA nandritra ny fandraisany anajara tamin’ny fanamarihana ny faha 100 taonan’ny OIT. Ankoatry ny fandraisany anjara tamin’ny fikaonandoha iraisam-pirenena faha 108 ho an’ny asa dia nihaona manokana tamin’ny tale jeneralin’ny sampandraharaha maneran-tany ho an’ny Varotra na ny OMC atoa Roberto AZEVEDO ihany koa ny filoha Andry RAJOELINA.
Fifanarahana miisa enina mikasika ny mpiasa mpifindra monina, ny fifandraisana ara-kasa eo amin’ny asam-panjakana, ny fifampiraharahana iombonana, ireo biraon’ny sehatra tsy miankina, mpiasa an-trano ary ny asa an-terivozona no vita sonia teo amin’ny filohan’ny repoblika Andry RAJOELINA nandritra ny fankalazana ny faha 100 taonan’ny OIT. Nahavita be lavitra noho ireo firenen-kafa i Madagasikara hoy ny tale jeneralin’ny birao iraisam-pirenena ho an’ny asa atoa Guy RIDER.
« Fifanarahana manan-danja avokoa ireo vita Sonia ireo koa misaotra anao aho ary maneho ny fankasitrahana ny fihetsiky ny fitondrana malagasy amin’izao fankalazana ny faha 100 taonan’ny OIT izao izahay. Tanjona napetrakay ny hanaovan’ireo firenena mpikambana sonia fifanarahana iray avy, saingy ianareo kosa nahavita be lavitra noho izany. «
Manamafy ny fijoroan’i Madagasikara hijoro ho an’ny fanomezana asa mendrika ho an’ny rehetra araka ny lohahevitry ny fankalazana izao ezaka lehiba vitan’ny filohan’ny repoblika izao hoy ny minisitry ny asa izay niara-dia tanatin’ny delegasiona Malagasy.
Teto ihany koa dia nihaona manokana tamin’Atoa Roberto AZEVEDO, tale jeneralin’ny sampandraharaha manerantany ho an’ny varotra ny filohan’ny repoblika Andry RAJOELINA, nandritra ny fihaonana no nanambaran’ity tale jeneralin’ny OMC ity fa vonona ny hanohana sy hiara-dia amin’I Madagasikara ity sampandraharaha iraisam-pirenena goavana ity.